Iyo Trends Yese Mobile App Inogadzira Inofanirwa Kuziva ye2020 | Martech Zone
Kwese kwaunotarisa, zviri pachena kuti nharembozha yave kubatanidzwa munzanga. Maererano ne Allied Musika Wotsvaga, yepasi rose musika wemusika saizi yakasvika $ 106.27 bhiriyoni muna 2018 uye inofungidzirwa kuti isvike $ 407.31 bhiriyoni na2026. kukosha kunounzwa neapp kumabhizinesi haigone kuiswa pasi. Sezvo musika wekufambisa unoramba uchikura, kukosha kwemakambani anobata vatengi vavo neapp mbozha ichave yakakwira zvakanyanya.
Nekuda kwekushanduka kwetraffic kubva kuchinyakare webhu midhiya kuenda kunharembozha, iyo nzvimbo yekushandisa yakapfuura nekukurumidza matanho ekushanduka. Kubva pamhando dzeapplication kuenda kune mobile app dhizaini maitiro, pane zvakawanda zvinhu zvekutarisa kana iwe wafunga kugadzira chirongwa chebhizinesi rako. Kungovaka app uye kuikanda muchitoro cheapp hakusi kuzoshanda zvakanaka pakushandura vatengi. Kubatana kwechokwadi uye shanduko zvinoda chinokanganisa chiitiko chevashandisi.
Izvo zvinogara zvichichinja zvinodiwa nevatengi zvinoshandura zvinodiwa pamusika, uye kushandisa dhizaini kufunga kwekuvandudza kwako app kwakakosha. Uine izvo mupfungwa, kune mamwe mafoni app dhizaini maitiro kubva ku2019 aunofanirwa kuchengeta mundangariro panguva yekuvandudza maitiro ayo anogona kutsanangura 2020.
Maitiro 1: Dhizaini Nemaitiro Matsva Mupfungwa
Iwo ekutanga ekushandisa anoshandiswa mune nharembozha kusvika panguva ino anga ari swipes uye nekudzvanya. Nhare UI mafambiro mu2019 akaisirwa izvo zvinozivikanwa se Tamagotchi Zviratidzo. Kunyangwe iro zita richigona kukonzeresa kupidiguka kune chaiwo mhuka dzinovaraidza, Tamagotchi Gestures mune nharembozha ndeyekuwedzera iro rakakwira mwero weanosimudzira uye vanhu zvinhu. Chinangwa chekushandisa izvi maficha mune yako dhizaini kutora zvikamu zvezvishandiso zvako zvisinganyanyo shanda zvine chekuita nekushandisika kwayo uye kuchisimudzira nerunako runoshandiswa nevashandisi kugadzirisa ruzivo rwavo rwese.
Beyond Tamagotchi Gestures, nharembozha dhizaini dhizaini ichave nevashandisi vanobata ne-on-screen element nekushandisa swiping gestures pamusoro pekubaya. Kubva mukuvandudzwa kwekutsvaira mameseji kusvika kune ekutsveta anoshandiswa sechinhu chekutanga mukufambidzana kunyorera, kutsvaira yave nzira yakasarudzika yekudyidzana neyekubata skrini pane kudzvanya.
Maitiro 2: Chengeta Saizi Saizi uye Inopfeka Tekinoroji muPfungwa Paunenge Uchigadzira Nhare Mapurogiramu
Iko kune hukuru hwakasiyana kana zvasvika kune saizi saizi. Nekuuya kwema smartwatches, iwo maumbirwo echiratidziro atanga kusiyanisawo. Paunenge uchigadzira application, zvakakosha kuti ugadzire dhizaini inoteerera iyo inogona kushanda sekufunga pane chero skrini. Uine bhenefiti yekuwedzera yekuenderana nemawatchwatches, une chokwadi chekuita kuti zvive nyore kune vatengi vako kuti vabatanidze yako app zviri nyore uye zviri nyore muhupenyu hwavo. Smartwatch kuenderana iri kuramba ichikura zvakanyanya kukosha, uye sekudaro yaive yakakurisa nhare yeUI mu 2019. Kusimbisa izvi, muna 2018, paive nemamirioni gumi nemashanu emamirioni akatengeswa muUnited States moga.
Unopfeka tekinoroji indasitiri inoenderera ichikura uye kutsanangura nharembozha dhizaini dhizaini gore rino. Mune ramangwana, mashandisiro achafanirwa kusanganisira akawedzera echokwadi mabasa eakajeka magirazi zvakare. Kugadzira zano reAR izvozvi nekushandisa izvo maficha mu mobile app zvinogona kutamba chinzvimbo chakakosha mukuwana kuvimbika kwevatambi vekutanga.
Trend 3: Mobile App Dhizaini Maitiro ari Kusimbisa iyo Ruvara Scheme
Mavara anosanganisira yako brand uye akabatana zvakanyanya neako zita rechiratidzo. Icho ndicho chiziviso chaicho chinobatsira mabhizinesi kusangana nevatengi vavo vemangwana.
Kunyangwe dhizaini yemavara inogona kunge isingaite kunge inofanirwa kuve yekutanga kunetsekana kana iri pachena dhizaini dhizaini, shanduko dzisingaoneki mumavara dzinogona kazhinji kuve chikonzero cheyakajeka kana chisina kunaka kutanga kuita kune yako app - yekutanga kuratidzwa kunoita mutsauko wese.
Imwe yema mobile app dhizaini dhizaini iyo iri kushandiswa kazhinji kazhinji iko kushandiswa kwemavara gradients. Kana iwo gradients akawedzerwa kune zvinofambidzana zvinhu kana kumashure, ivo vanowedzera vibrancy inoita kuti yako app iwedzere kubata-maziso uye kumira kunze. Kuwedzera kune iwo mavara, kuenda kupfuura zvimisikidzo uye kuendesa mifananidzo inovandudzwa kunogona kuita kuti chako chikumbire zvakanyanya.
Maitiro 4: Iyo Nhare UI Dhizaini yeKuteedzera iyo isingatombobuda Kunze Kwechitaera: Kuchengeta Icho Chakareruka
Hapana chinokonzeresa mutengi kudzima chikumbiro chako nekukurumidza kupfuura kushambadzira kwekushambadzira kana chinonyanya kuomesa mushandisi interface. Kuisa pekutanga kujekesa uye mashandiro pamusoro pehuwandu hwezvinhu zvinoratidza kuti zvinogadzira zvirinani mutengi ruzivo. Ndicho chimwe chechikonzero nei dhizaini dhizaini inosimbisa zviri nyore gore rimwe nerimwe.
Kuti uite izvi, zvakakosha kuti utore mukana wehukuru hwakasiyana hwescreen, sezvambotaurwa. Minimalistic dhizaini inobvumidza vanhu kuti vatarise pachinhu chimwe panguva uye vadzivise kuwanda kwekunzwa izvo zvinowanzo kuguma nevanhu vane zvakashata zviitiko. Imwe nyore kuitisa chimiro cheiyo mobile UI dhizaini ndiko kusanganisa kweakagadziriswa nzvimbo zviitiko. Izvi zvinoshandisa nzvimbo masevhisi ayo vashandisi vefoni vakatora zvakanyanya nechido sezvo nguva inopfuura.
Maitiro 5: Kushandisa iyo Sprint Stage yeDziviriro
Maitiro ekuvandudza ane akawanda matanho, kubva dhizaini dhizaini uchishandisa zvishandiso zvekushandisa kuvaka prototype, kuyedza, uye kuvhura iko kunyorera. Iyo yekutanga sprint inoita basa rakakosha mukuziva nzvimbo dzakakosha dzinoshandiswa nevashandisi vako nguva yakawanda uye kuona kuti nzvimbo idzodzo dziri kutaura nyaya yechako chako uchipa chakasarudzika chiitiko cheapp kune vashandisi. Hazvishamise, saka, kuti maitiro aya anogara pane yedu runyorwa rwe mobile app dhizaini maitiro ekuona.
Kusarudza kuita yekutanga 5-zuva dhizaini dhizaini inogona kubatsira kuziva nekusimbisa zvinangwa zveapp. Pamusoro pezvo, kushandisa storyboarding uye kuvaka iyo yekutanga prototype kuyedza uye kutora mhinduro kunogona kugadzira kana kutyora chigadzirwa chekupedzisira. Maitiro aya anoita kuti iwe upinde mudanho rekuvandudza uine zvinotsanangurwa zvakajeka, zvinangwa zvakasarudzwa zvinehunyanzvi. Uyezve, zvinokupa chivimbo chekuti chirongwa chako chekuvandudza chirongwa chichaguma nekushandura pfungwa yacho kuti ive yechokwadi.
Ita shuwa Yako Nhare mbozha App Dhizaini Ndiro Rakanakisa Zvarinogona Kuva
Kuvandudza nharembozha kuri kuve chinodiwa pakubata kwevatengi uye kutora. Chinotonyanya kukosha ndechekuona kuti iyo app yakagadzirwa ndeyemhando yepamusoro uye inopa yakanaka vatengi ruzivo. Saizvozvo, 57% yeinternet vashandisi vakati havangakurudzire bhizinesi riine chisina kugadzirwa online chikuva. Vanopfuura hafu yekambani 'internet traffic ikozvino iri kuuya kubva kunhare mbozha. Kuchengeta izvo mundangariro, UX ndiyo inonyanya kukosha chikamu chekuburitsa bhizinesi app. Ndosaka kuchengeta zvinhu senge nharembozha dhizaini dhizaini mupfungwa kwakakosha.
Iyo mobile chimurenga iri muzere maruva. Kuti ubudirire munzvimbo yemusika yemazuva ano, kutora tekinoroji yepamberi, kukwira mafungu ekufambira mberi, uye kugara uchiziva zvemazuva ano dhizaini dhizaini inovimbisa kuti iwe unoramba wakakodzera uye unokwanisa kupa kune zvinodiwa nevatengi vako.
Tags: nharembozha yeappnhare mbozha yekuvandudza maitironharembozha app kukoshanharembozha applicationnhare yekushandisa mushandisiyokungoi- ta baratamagotchi gesturesMaitirotekinoroji inopfeka
Asati atanga Blue Label Labs muna 2009, Bobby aive maneja wePurogiramu kuMicrosoft mukati meServers & Tools division. Pamwe chete nemubatanidzwa-muvambi Jordan Gurrieri, Bobby akabatanidzwa Appsters: Yekutanga gwara kune app kushambadzira. KuBlue Label Labs, basa raBobby sa CEO rinosanganisira kupa zvine hungwaru uye zvehunyanzvi kutarisa kune ese maapplication atinogadzira. Bobby akapedza kudzidza kuYunivhesiti yeWaterloo aine Bachelor yeMathematics neComputer Science uye akapedza MBA yake paColumbia Bhizinesi Chikoro. Anoda crepes.